New Lead in Zimbabwe's 'Missing' Diamond Revenue? - allAfrica.com
Mbada Diamonds could have denied Zimbabwe of millions of dollars in revenue by under-declaring its diamond sales over the years after it emerged that its average price per carat was about three times lower than that of other firms extracting diamonds, writes The Herald.
Mbada Diamonds could have prejudiced the State of millions of dollars by under-declaring its diamond sales over the years after it emerged that its average price per carat was… Read more »
Citizen, 8 May 2016
Zimbabwean president, Robert Mugabe, got the world jawing angrily in early March this year. He used his traditional birthday interview with State television to reveal that his… Read more »
Zimbabwe: Miner Fights Govt Over Seizure
New Zimbabwe, 29 February 2016
MBADA Diamonds has won a High Court reprieve as it fights the government's decision to seize the controversial Marange diamond industry. Read more »
Zimbabwe: Reprieve for Mbada
The Herald, 1 March 2016
Government has instructed the Attorney-General's office to contest yesterday's High Court order compelling the State to allow the return of Mbada Diamond Private Limited to its… Read more »